ဒယ်နီ ၊ ဒယ်ပြာ သုံးသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ – Daily News
မိတ်ဆွေကောင်းတို့ အိမ်အများစုမှာ ဒယ်နီ ဒယ်ပြာ ဒယ်ခရမ်း တို့ကို တော်တော်များများ အသုံးပြုကြမှာပါ။ အလုံးပေါင်းမနည်း ပျက်လိုက် ဝယ်လိုက်နဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနေကြတဲ့သူတွေရှိသလို ဝယ်ပြီးတာနဲ့ စနစ်တကျ တန်းသုံး
တတ်တဲ့ လူတွေလည်း တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အတွက် အသုံးတဲ့ စေမယ့် အချက်လေးတွေ ကျွန်တော် ထပ်ထည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။1. ဒယ်နီအများစု အားလုံးနီးပါးမှ
ာ မီးဆွဲအား 2000W ရှိပြီး မီးအတိုး အလျော့ လုပ်လို့ ရတာကြောင့် Extension Cord (ကြိုးခွေအဝိုင်းများ)နှင့် လုံးဝ မသုံးသင့်ပါဘူး။ 2. အခုနောက်ပိုင်း ထွက်သမျှ ဒယ်နီတွေမှာ Auto cut-off system (အလိုလျောက်မီး
ထိထားပြီး ဟင်းချက်ပြီးရင် ခလုတ်ပိတ် ပလပ်ဖြုတ်ပါ။ ဒါဆို ဘုကို အတိုးအလျော့မကစားပဲ အဆုံးမှာပဲ ထားခိုင်းတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးက ဘုပျက်ခြင်း ကျိုးခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ပါပြီ။ မီးဆွဲအား ရှိနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်က
ခိုင်ခံ့သော အထိုင်နဲ့ သုံးတယ်ဆိုရင် ဘာမှ စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူးနော်။3. ဂျိုးကပ်တဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပေးချင်ပါတယ်။
ရိုးရိုး အိုးဖြူဖြစ်ဖြစ် non-stick မကပ်တဲ့ အိုးမည်းဖြစ်ဖြစ် ဂျိုးကပ်တယ်လို့ ခဏ ခဏ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှ ဝယ်သူကောင်းတွေဆီမှ အမြဲကြားရပါတယ်။ တကယ်တော့ အဓိက ဒီအချက်ကြောင့်ပါပဲ။ထမင်းပေါင်းအိုးတွေရဲ့ ထုံးစံမှာ
တစ်ခါ သိုးဖူးသွားရင် ဘယ်လောက်ဆေးဆေး နောက်ပိုင်း အသိုးလွယ်တာမျိုးကို ကြားဖူး တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒါလည်း ဒီသဘောပါပဲ အိုးဖြူဆို ကြော်လှော်တဲ့အခါ ကိုယ်က တစ်ခြား အလုပ်လုပ်နေလို့ ပစ်ထားမိပြီး ကပ်သွားပြီ ဆိုရင်
နောက်ပိုင်းလည်း ဘယ်လောက်ဆေးဆေး ကပ်ဖို့ အားသာနေပါပြီ ။ (ချွင်းချက်အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အိုးက မီးမညီတာမျိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်)4. နောက်တစ်ချက်က Non-Stick အိုးပါ။ မကပ်တဲ့အိုးဆိုပြီး ဘာလို့
ကပ်လဲ။ ဒါကကျတော့ ဒီလိုပါ။ non-stickအိုးကို သုံးတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော် များများ က ထုံးစံအတိုင်း စတီးဇွန်း သံဇွန်းနဲ့ သုံးကြတာများပါတယ်။ (ကျွန်တော့် အမေအပါအဝင်ပေါ့) အဲဒီတော့ မွှေရင်း ခြစ်မိတဲ့ အခါကျတော့
Non-Stick ကနေ မ Non-Stick ဖြစ်လာတဲ့ သဘောဖြစ်ပြီး အားရပါးရကပ်တော့တာပါပဲ။တကယ်တော့ Non-Stick က သစ်သား ယောက်မ (သို့မဟုတ်) သူနဲ့တွဲသုံးရတဲ့ ဇွန်းတွေ ယောက်မတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေနဲ့ဆို
ရေရှည် အဆင်ပြေစွာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ (city mart, ocean တွေမှာ ဝယ်လို့ရနိုင်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း တွဲရောင်းပေးဖို့ စီစဉ်နေကြပါပြီ)။5. နောက် အိုးကပ်တာပြောရင်း တစ်ဆက်တည်း အိုးမှာကပ်နေတဲ့ ဟင်းတွေထမင်း
အကုန် သူ့အလိုလို ကွာလာတာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။6. ဒါဆိုတစ်ဆက်တည်း ဆေးကြောပုံနဲ့ ဆေးကြောပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်လို ရေရှည်ခံအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပေးပါ့မယ်။ ဆေးတာကတော့ အဓိက အိုးတစ်ခုလုံးကို မ
ဆေးမိဖို့ပါပဲ။ အိုးအထဲပိုင်းထဲရေထည့် ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးပြီးရင် အိုးအပြင်ကို ရေစိုဖော့ဖတ်လေးနဲ့ တိုက်ပေးရင် အထူးအဆင်ပြေ ပါတယ်နော်။အိုးကို စိတ်ကြိုက်ဆေးကြောပြီးပြီဆိုတာနဲ့ မီးပလပ်ပြန်ထိုး ခလုတ်ဖွင့်ပြီး အိုးမှာရှိနေ ကပ်နေ
7. သြော် ဓာတ်လိုက်တယ် ဆိုလို့ ဒယ်နီကို ချက်တဲ့အချိန် သုံးတဲ့ဇွန်းက လက်ကိုင်ကိုင်း ကော် (သို့မဟုတ်) သစ်သား ဖြစ်ဖို့ကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။တစ်ချို့ ဒယ်နီတွေက ဆေးကြောနည်းအလွဲ (သို့မဟုတ်) သုံးတာကြာရင်
earth (အက်) ဝင်တတ်ပြီး ဓာတ်လိုက်တတ်လို့ အန္တရာယ်မများပေမယ့် အမှတ်တမဲ့ လန့်နိုင်တာမို့ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ မဖြစ်ရလေအောင် အထူး အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။ကဲ ဒီလောက်ဆို အိမ်ရှင်မ
တတျတဲ့ လူတှလေညျး တျောတျောမြားမြား တှရေ့ပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတေျာ့ မိတျဆှကေောငျးတှေ အတှကျ အသုံးတဲ့ စမေယျ့ အခကျြလေးတှေ ကြှနျတျော ထပျထညျ့ ပေးလိုကျပါတယျ။1️. ဒယျနီအမြားစု အားလုံးနီးပါးမှ
ာ မီးဆှဲအား 2000W ရှိပွီး မီးအတိုး အလြော့ လုပျလို့ ရတာကွောငျ့ Extension Cord (ကွိုးခှအေဝိုငျးမြား)နှငျ့ လုံးဝ မသုံးသငျ့ပါဘူး။ 2️. အခုနောကျပိုငျး ထှကျသမြှ ဒယျနီတှမှော Auto cut-off system (အလိုလြောကျမီး
ရေကူးကန်ပါတဲ့အိမ်လေးပါဆိုပြီး ဝယ်ပြီးခါမှ ဂျင့်ထည့်ခံလိုက်ရမှန်း သိခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားရဲ့အဖြစ်
ခေတ်သစ်ဖေဖေတို့ ရဲ့ ကလေးထိန်းနည်း
အာကာသထဲကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရောက်ဖူးခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က...